Maal Qabeenkii ugu caansanaa Itobiya oo Geeriyooday iyo shaki kadhashay Geeridiisa – Xeernews24
Maal Qabeenkii ugu caansanaa Itobiya oo Geeriyooday iyo shaki kadhashay Geeridiisa
Ganacsadihii ugu dhaqaale iyo Hantida badnaa Itobiya oo dhowaan loo qaaday Isbitaal kuyaala dalka Ingiriiska kadib markii xanuun laga shakiyay uu lasoo darsay, ayaa maalinimada Khamiistii lasoo dhaafay ku Geeriyooda isbitaalkii ladhigay.
Mahamed Husein Al Amoudi oo Asal ahaan kasoo jeeda dalka Sucuudiga ayaa kudhashay dalka Itobiya waxaana dhashay Haweenay Itobiyan ah, taasi oo keentay inuu noqdo shakhsi Haysta dhalashada 2-da wadan ee Aabihii iyo Hooyadii kasoo kala jeedaan.
Al-Amoudi ayaa ahaa ninka ugu Hantida Itobiya sidoo kalana waxaa uu ahaa ninka 2-aad ee Qaarada Africa ugu Taajirsan, waxaana magaalada London loo Geeyay xanuun aan lashaacin waxa uu yahay kaasi oo ugu dambays uu Galabnimadii khamiista u Geeriyooday sida warbaahinta Itobiya qaar kamidi shaacisay.
Geerida Al-Amoudi ayaa dhalisay shaki badan oo laxidhiidha in la sumeeyay waxaana loo diray maydkiisa baadhis rasmi ah oo laxidhiidha sababta xanuunka iyo Geerida kadiska ah ee kutimid, waxaana Qaraabada ninkani laga soo xigtay inaysan meesha kasaarayn in sababta dhimashadiisa ay noqon karto mid kutimid cadaawad isaga kadhan ah.
Ganacsadaha ayay saaxiib dhow ahaayeen Kaligii Taliyihii hore ee maamulka Woyanaha kaasi oo lasheego inuu kadhexeeyay xidhiidh wajiyo badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasada ah, waxayna saaxiibnimadii Zenawi u sahashay Al-Camuudi Qandaraasyo badan iyo inuu Helo Dhul Beereedka ugu badan ee shakhsi kuyeesha dalka Itobiya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/images-1.jpg 201 250 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-03 16:58:572016-10-03 16:58:57Maal Qabeenkii ugu caansanaa Itobiya oo Geeriyooday iyo shaki kadhashay Geeridiisa
Daawo Wararkii Ugu Danbeyay Rabshado ay Dad Badan ku Dhinteen oo ka Dhacay Gobolka... Waa Taarrikh Mug ´Weyn Laakiin Noqotay Maanta Wixii la odhan Jirey Daba Dambas...